Shijiazhuang Teneng Electrical & Mechanical Equipment Co., Ltd. ndiye nyanzvi mugadziri of welded simbi mutopota kugadzirwa mutsetse, kutonhora rwakapetwa aindiumba mutsetse, slitting mutsetse, akachekwa-to-urefu mutsetse uye vakarondedzera ebetsero michina. Teneng kambani ndiye ano zvebhizimisi izvo anokwanisa kutsvakurudza uye kukura, kugadzirwa uye okutengesa. Teneng ari nhengo parangano China Roll Achigadzira Association, purezidhendi nhengo Hebei Steel Tube Trade Association.
Teneng michina ndiwo inonyatsobudirira chubhu kugadzira michina zvinowanikwa munyika. In China, anozivikanwa vanoshandisa vari Hebei Jingye Group, SANY Group, China Shipbuilding Industry Corporation, Shangai Changzheng Heavy Industry Co., Ltd etc.
Teneng michina vari kushanda mune dzimwe nyika dzakawanda kunze China, akadai
Customer kudiwa ndiko kutyaira simba zvokugadzira zvinhu kukura, simba simba kambani iri kutsigirwa upgrading pakati mabikirwo. Teneng kambani achava pamwe mudzimba uye dzimwe vagadziri kuwanisa yepamusoro zvokushandisa, nyanzvi ano, basa wakakwana nokuda vatengi.
Kwete Of Vashandi : 150 ~ 200
Year Chigaro : 2009
Mukudhinda Power & Service System :
Teneng kambani vane mamiriyoni mativi mamita ane fekitari, uye vane simba Kufambisa hurongwa pamwe ndiri weredha uye chakuvhuvhu gadzira. Equipment mureza zvikamu vanosarudzwa inozivikanwa zvebhizimisi chigadzirwa, kunowedzerwa chigadzirwa kuita uye upenyu basa. Kubva chinoumba kugadzira gungano muchina, tinoita macheki zvese, nokuita ezvinhu kugadzirwa basa. Pashure basa pachako zviri kurovedza kubva tsika, mubasa midziyo nokutumwa kwemakore akawanda, kugadzirisa matambudziko akasiyana-siyana mukurima tsika, nhungamiro midziyo chokugadza kudzidzisa vashandi kuti vatengi.